Mogadishu Journal » Weerar lagu qaaday xarunta maamulka deegaanka Garas-Baaleey
Mjournal :-Rag hubeysan ayaa xalay waxaa ay weerar ku qaadeen Xarunta Maamulka deegaanka Garas-Baaleey ee duleedka Magalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Qaar ka mid ah ilaalada Xarunta deegaanka Garas-Baaleey oo ku taalla dhabarka dambe ee Jaamacadda Shabeelle iyo ragga weerarka ku qaaday ayaa waxaa halkaasi ku dhexmaray dagaal socday in ka badan 10 Daqiiqo.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen raggii Xarunta weerarka kusoo qaaday,waxaana xilliga dagaalka uu socday halkaasi tegay Ciidamo gurmad ah,kuwaas oo ka tegay Xerada Asluubta ee Xaafada Galmudug ee Magalada muqdisho,kuwaas oo xoojiyay Ciidamada ilaalada ka ah Xarunta Maamulka deegaanka Garas-Baaleey.
Waxaa jira khasaaro ka dhashay dagaalkaas,iyada oo Goobjoogayaal ay sheegeen in dagaalka labada dhinac dehxmaray ay ku dhaawacxmeen laba ruux,hayeeshee aysan jirin wax dhimasho ah oo ka dhashay.
Dhinaca kale Ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa tegay Xarunta Maamulka deegaanka Garas-Baaleey,iyaga oo howlgallo dad lagu soo qabtay ka sameeyay Xaafadaha ku dhow dhow Xarunta Maamulka,kuwaas oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin dadka amnidarrada ka geysta deegaankaas.
Majiryo cid weli sheegatay mas’uuliyada weerarka lagu qaaday Xarunta Maamulka deegaanka Garas-Baaleey,hayeeshee waxaa inta badan weerarada noocaas oo kale ah fuliya Ururka Al-Shabaab.